घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू डोमिनिक Szoboszlai बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
हाम्रो डोमिनिक साजोबास्लाइ जीवनीले तपाईंलाई उनको बाल्यावस्थाको कहानी, प्रारम्भिक जीवन, परिवार, आमा बुबा, प्रेमिका / पत्नी हुनु, जीवनशैली, व्यक्तिगत जीवन र नेट वर्थको बारेमा तथ्यहरू बताउँछ।
साधारण शब्दहरूमा, हामी तपाईंलाई मिडफिल्डरको जीवन यात्राको साथ प्रस्तुत गर्दछौं, शुरुआती दिनदेखि, जबसम्म उनी प्रसिद्ध भए। तपाइँको आत्मकथा भूखलाई छेड्न, यहाँ वयस्क ग्यालेरीमा उनको बाल्यकाल छ - डोमिनिक स्जोबोस्लाइ बायोको एक सारांश।
हामी तपाईंलाई डोमिनिक स्जोबोस्लाइको जीवनीको साथ प्रस्तुत गर्दछौं। उसको जीवन र उदय फोटो हेर्नुहोस्।
हो, २०२१ मा धेरै विश्लेषकहरूले यो भविष्यवाणी गरेका छन् उनी विश्वको सर्वश्रेष्ठ मिडफिल्डर हुन सके भविष्यमा तसर्थ, उनले कथित रूपमा आर्सेनलको पूर्व प्रशिक्षकको आँखा लिएको छ, ईरी। जे होस्, केहि प्रशंसकहरु लाई उनको जीवनी को बारे मा थाहा छ, जो काफी चाखलाग्दो छ। धेरै विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
डोमिनिक स्जोबोस्लाइ बचपन कहानी:
जीवनी सुरुवातीहरूको लागि, उहाँ उपनाम "सानो एक" बोक्नुहुन्छ। डोमिनिक स्जोबोस्लाइ अक्टोबर २००० को २th तारिखमा उनकी आमा, Zsanet Nemeth र बुबा, Zsolt Szoboszlai, Szekesfehervar, हंगेरीमा जन्मनुभएको थियो। उहाँ तलको चित्रण आफ्ना आमा बुबाको बीच मिलनबाट जन्मेका दुई बच्चाहरु मध्ये जेठोको रूपमा यस संसारमा आउनुभयो।
उसका आमा बुबा, Zsanet Nemeth र Zsolt Szoboszlai हेर्नुहोस्। कुनै श doubts्का छैन, उसले आफ्नो आमाको सुन्दर देखिन्छ।
डोमिनिक स्जोबोस्लाइ बढ्दो दिन:
स्पष्ट रूपमा, जवान हंगेरी एक हंसमुख बच्चा थियो जसले आफ्नो बाल्यकालको समयमा फुटबल खाए र पिए। त्यस पछि, उसले पछिल्लो खेलौनाहरूसँग खेल्ने बारेमा धेरै ध्यान दिएन जहाँसम्म उनका बुबाले उनलाई बल प्रदान गर्छन्।
निस्सन्देह, फुटबलको खेलमा कुनै दिन उसको बुबालाई पार गर्न उसको स्वभावलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन। कुनै श doubts्का छैन, स्जोबोस्लाइ आफ्नो बाल्यावस्थाको सपनाहरू पूरा गर्न जाँदैछन्।
डोमिनिक स्जोबोस्लाइ परिवार मूल:
पहिले नै भनिएझैं प्राविधिक ड्रिबलर स्जेक्सफेहरवारको हो, जुन हंगेरीको नौौं ठूलो सहर हो। उसको गृहनगर dates औं शताब्दी ईसा पूर्वको मिति हो। तसर्थ, यो हंगेरीको सब भन्दा पुरानो शहरहरू मध्ये एक हो।
हंगेरी वास्तवमा उनी जस्तो प्रतिभा पाएकोमा धन्य छ।
उत्पत्तिको ठाउँ स्जोबोस्लाइ हंगेरीको महल र किल्लाहरूको साथ रणनीतिक ठाउँहरू मध्ये कम से कम छैन। वास्तवमा यो कुख्यात बोरी क्यासलको घर हो। अरू के छ? ... बोरी क्यासल कलाको काम हो, जुन आर्किटेक्ट जेनो बोरीले १ 1900 ०० को शुरुमा सुन्दर भित्री बगैंचामा निर्माण गरिएको थियो।
डोमिनिक Szoboszlai परिवार पृष्ठभूमि:
चाखलाग्दो कुरा के छ भने, त्यो युवावस्था परिवारमा हुर्किएको थियो जसलाई पैसाको चिन्ता थिएन। स्पष्ट रूपमा, उनको बुबा एक पेशेवर एथलीट थिए जसले आफ्नो परिवारलाई खेलकुदबाट कमाई समर्थन गर्दछन्। कुनै श doubts्का छैन, Zsolt राम्रो वित्तीय शिक्षा थियो। तसर्थ, उहाँलाई आफ्नो परिवारको आवश्यकताहरू कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर थाहा थियो, सेवानिवृत्त भए पनि।
कसरी डोमिनिक स्गोबोस्लाइ फुटबल क्यारियर सुरु भयो:
ऊ खेलमा खेल्दा ऊ थोरै थियो।
सेट-पीस विशेषज्ञको यात्रा एकदम कोमल उमेरबाट सुरु भयो। जब उनले6वलटाए, उनका बुबाआमा जसले फुटबलको महत्त्व जान्दथे उनले २०० Vide मा विडिओटन - एउटा फुटबल एकेडेमीमा भर्ना गरे। हुनसक्छ, स्कोबोस्लाइले आफ्नो खेल संस्थानका गतिविधिहरूमा ध्यान दिए।
यद्यपि उनका बुबाले उनलाई आफ्नो व्यक्तिगत प्रशिक्षकको रूपमा थप पाठ दिनुपर्‍यो।
विडिओटन युवा सेटअपमा उसको दिनहरू बितेको बिरलै एक वर्ष, साजोबास्लाइका आमा बुबाले उनको युवा विकासको निरीक्षण गर्ने आवश्यकता महसुस गरे। तसर्थ, Zsolt (उनका बुवा) एक नयाँ खेल संस्थान शुरू गर्नुभयो, जुन उनले अकेडेमी फोनिक्स गोल्ड एफसी नाम दिए।
“मेरो बुबा मेरो विकासको प्रमुख पक्ष हुनुहुन्थ्यो। उसले प्रशिक्षण र सल्लाह दिन बिताएको घण्टा बिर्सनु असम्भव छ।
एक संस्कृतिको रूपमा, उसले मलाई ड्रिल गर्न जारी राख्ने थियो जब टोलीको प्रशिक्षण सत्र समाप्त हुन्छ। इमानदारीपूर्वक, मैले सधैं मेरो एकेडेमीमा सबै भन्दा बढी काम गरेको छु। ”
डोमिनिक स्जोबोस्लाइ प्रारम्भिक क्यारियर जीवन:
कडा परिश्रम र जोश संग, dribbler धेरै अन्य आगामी प्रतिभाहरु को बीचमा फस्टा। फिनिक्स गोल्डमा उनका बुबाको नेतृत्वमा उनको आठ वर्षको प्रशिक्षणले उनलाई अन्य पेशेवर क्लबहरू अन्वेषण गर्ने अवसर प्रदान गर्‍यो। ती बर्षहरूमा, प्लेमेकरले २०११ मा Ujpest को साथ loanण मन्त्र गरे।
सानोले अक्सर बुबाको पाठ हृदयमा राख्थ्यो, पिचमा समेत।
चाखलाग्दो कुरा के छ भने, २०१z मा एमटीके बुडापेस्टमा सामेल हुनुभन्दा पहिले साजोबास्लाइले फुटबलको बारेमा धेरै कुरा सिकेका थिए। एमकेटीमा एउटा असाधारण प्रदर्शन गरिसकेपछि एफसी लिफरिंग उनको सेवा खोज्न आयो। तसर्थ, उनले अष्ट्रियाको 2015०० किलोमिटर यात्रा शुरू गरे जहाँ उनी २०१ 400 मा लिफरिंगको युवा टीममा सामेल भए।
बिस्तारै उनले अष्ट्रियामा ट्र्याक्सन प्राप्त गर्न थाले।
साल्जबर्गको दोस्रो टीम (Liefering) बाट सम्मिलित हुन प्लेमेकरलाई स्वचालित सफलताको ग्यारेन्टी छैन। पछि, उहाँ लगातार खेल्ने समय पाउनबाट माईल टाढा हुनुहुन्थ्यो। यद्यपि उनले आफ्नो टाउको सीधा राखे र चाँडै लाफरिंगको समूहमा पुग्यो। दुःखको कुरा, फाँटिएको अस्थिबन्धले केही हप्ताहरू रोक्न खोज्यो। तसर्थ, उनको चोटले शीर्ष स्तरीय प्रतिस्पर्धामा उनको चालमा ढिलाइ गर्‍यो।
डोमिनिक स्जोबोस्लाइ - प्रख्यात बायो रोड:
भाग्यको रूपमा यो हुनेछ, १ years बर्षे मिडफील्डर २०१ 17 मा मार्को रोजको व्यवस्थापन अन्तर्गत साल्जबर्गमा सामेल भए। त्यहाँ उनले एक शक्तिशाली हमला गर्ने त्रिशूल गठन गरे। Haaland र टाकुमी मिनामिनो। कुनै टाढाको समयमा, उनी २०२० मा best० सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाडीहरु मध्ये एक थियो.
ऊ आफ्नो टीमका साथीहरूसँग अझ राम्रो र राम्रो हुँदै गयो।
कहिलेकाँही सेट-पीस लिनेलाई यस्तो लाग्यो कि उसले आफ्नो व्यवस्थापकहरूले उनीबाट अपेक्षा गरेको प्रकारको प्रभाव गरिरहेको छैन। जस्तो sportskeeda.com व्याख्या गर्दछ; यो अस्ट्रियन क्लबमा स्जोबोस्लाइले महसुस गरे कि उनी आफ्नो निन्द्राबाट उठेर फुटबल खेल्नु पर्ने थियो।
डोमिनिक स्जोबोस्लाइ बायो - सफलता कहानी:
प्लेमेकरले आफ्नो क्लबमा तरंग मात्र बनाएन। उनले आफ्नो देशको लागि पनि असाधारण प्रदर्शन गरे। २०१ in मा हंगेरीको क्रोएशिया बिरूद्धको एक खेलको दौरान, साजोबास्लाइले विश्व स्तरीय आइकनहरू जस्तै सामना गरे लुका मोररिक र इवान रकीती। उनले आफ्नो उमेर भन्दा परेको परिपक्वता देखाए र ठाउँबाट बाहिर भनेनन् किनभने उनले आफ्नो देशलाई २-१ ले जित्न मद्दत गरे।
उनले सम्भ्रान्त वर्गको बीचमा प्रतिस्पर्धा गर्न ठूलो साहस लिए।
मैले यो बायो लेख्ने बित्तिकै, सोजोबास्लाइले साल्जबर्गलाई तीन अस्ट्रियन बुन्डस्लिगा पदवीहरूमा टाँसिरहन मद्दत गर्यो। यो उपलब्धि बनेको छ शीर्ष क्लबहरू जस्तै एसी मिलान, PSG, रियल म्याड्रिड र Leipzig आफ्नो हस्ताक्षर खोज्न आउन.
उसको क्लबको लागि यति धेरै ट्रफीहरू जित्न थाल्दा उसको जीवन राम्रो हुँदै गयो।
उसले आफ्नो बुबासँग परामर्श गरेपछि, सानोले साढे चार वर्षको सम्झौतामा २० लाख worth० लाख डलर बराबरको आरबी लाइपजिगसँग मोहर लगायो। बाँकी, उनीहरू भन्छन् कि यो इतिहास हो।
डोमिनिक Szoboszlai प्रेमिका / पत्नी हुन:
फ्री किक परफेक्शनिस्ट हामी बारे मा चिनिने दुई सम्बन्धहरु मा संलग्न छ। सबैभन्दा पहिला, उनले २०१ 2019 मा काटा (III) मिति दिए। दुर्भाग्यवस, उनीहरूको प्रेम कहानी एक ठोस आधारमा निर्माण गरिएको थिएन। तसर्थ, यो शुरू भएको लगभग तीन महिना पछि यसको टुक्रियो।
उनको पहिलो प्रेम, काटा (III) लाई भेट्नुहोस्। उनीहरूको सम्बन्ध लामो समय सम्म टिकेन।
उनको पहिलो असफल सम्बन्ध फिक्रका कारण निराश, सज्बोसस्लाई २०२० को अन्त्य सम्म कसैसँग डेटि। गरेन। धन्यबाद, उनले फेनी गेसेक नामको सुन्दर गोरा भेट गरे र उनीसँग प्रेममा परिणत भए।
डोमिनिक फन्नी गेसेकसँगको आफ्नो सम्बन्धमा बढी विश्वस्त भएको देखिन्छ। तसर्थ, उहाँ तिनीहरूको फोटो सोशल मिडियामा प्राय: साझेदारी गर्नुहुन्छ।
जब म यो बायो लेख्छु, मिडफिल्डरको प्रेमिका प्राय: उसलाई सँगै धेरै अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणहरूमा लैजान्छ। त्यहाँ उनले छेउबाट उसलाई समर्थन गर्दछ। चीजहरूको हेराईबाट, फन्नी आफ्नो भावी पत्नी र आमा बन्न सक्छिन् आफ्ना नजन्मेका बच्चाहरूको लागि।
डोमिनिक स्जोबोस्लाइ व्यक्तिगत जीवन:
के एक बनाउँछ ESPN को ब्रेकआउट खेलाडीहरू 2021 बाक्लो को लागी? सर्वप्रथम, ऊ त्यस्तो मानिस हो जो कुराकानी, मिलनसार, र भीडबाट उर्जा लिन चाहन्छ। स्पष्ट रूपमा, उहाँ सामाजिक कुराकानीमा हंसमुख र जिद्दी गर्नुहुन्छ। तपाईं सहमत हुन सक्नुहुन्छ कि उसले वृश्चिक राशिको चिह्नका गुणहरू धेरै मात्रामा पाएको छ।
फुटबल एक मात्र चीज होईन जुन स्जोबोस्लाइ मा राम्रो छ। उसको क्यारियर तालिका भन्दा टाढा, सेट-टुक्रा लिने ले अक्सर आफ्नो साथीहरूसँग स्नोबोर्डि timeमा समय खर्च गर्दछ। उनका केही शौकहरूमा खाना पकाने र भिडियो गेमहरू समावेश छन्।
ऊ आफैं साथी भएको साथीसँग समयको मजा लिन पनि मनपर्दछ।
जीवनशैली र नेट वर्थ:
अनुसन्धानले देखाउँदछ कि उसले साल्जबर्गमा लगभग € मिलियन डलरको वार्षिक वार्षिक तलब कमायो। हामीले अनौठो कुरा के पाउँछौं भन्ने तथ्य यो हो कि ऊ विलासी जीवनशैली बिताउने कल्पना गर्दैन। साथै, उनको सोशल मिडियाले Szoboszlai आफ्नो लागि एक सवारी किन्न थिएन भनेर प्रकट गर्दछ।
स्पष्ट रूपमा, साल्जबर्गले उनलाई एक ब्रान्डेड विदेशी कार उपहार स्वरूप प्रदान गर्‍यो, जुन उनले धेरै जसो आन्दोलनहरूको लागि प्रयोग गर्दछ। अन्तिममा, उनको फाइनान्समा, हामीले डोमिनिक स्जोबोस्लाइको नेट वर्थलाई op. million मिलियन डलर (२०२१ तथ्या .्क) को एक ठूलो रकम हुने अनुमान गरेका छौं।
अँ साञ्ची! ऊ आफ्नो ब्रान्डेड कारमा सँधै सवारी भएको महसुस गर्दछ।
डोमिनिक साजोबोस्लाइ परिवार:
आफ्नो ख्याति वृद्धि को लागी, सेट-टुक्रा लिन ले आफ्नो रणनीति बनाएको छ कसरी आफ्नो काम र परिवार बीच एक खुशी संतुलन पाउन। निस्सन्देह, उसको क्यारियरको जीत केवल स्वादिष्ट हुन्छ किनकि ऊ यो आफ्नो परिवारसँगै मनाउन सक्छ। तसर्थ, हामी तपाईंलाई डोमिनिकका ब्रूडहरूको बारेमा संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत गर्दछौं।
उनको परिवार उनको प्रख्यात महिमाबाट कहिल्यै बाहिर रहदैन।
डोमिनिक सोजोब्जलाईको फादरको बारेमा:
मिडफिल्डरको बुवा Zsolt Szoboszlai हो। उहाँ एक पेशेवर फुटबल खेलाडी हुनुहुन्थ्यो जसको उत्कटता कहिल्यै मर्दैन खेल छोडे पछि पनि। जब उसको खेलको दिन समाप्त भयो, Zsolt आफ्नो विशेषज्ञता भिडियो टेकडेमीमा युवा प्रतिभा कोचिंग मा। त्यहाँ उनले आफ्नो छोरालाई फुटबलको बारेमा धेरै सिद्धान्तहरू सिकाए।
भिडीटनले स्कोबोस्लाइको बुबालाई उनीहरूको संस्थानबाट बर्खास्त गरेपछि, उनी र अन्य दुईजनाले युवा प्रतिष्ठान स्थापना गरे जसलाई उनीहरूको नाम फोनिक्स-गोल्ड एफसी राखियो। तसर्थ, उसले आफ्नो छोराको युवा विकासको नयाँ खेल केन्द्रमा निरीक्षण गर्‍यो। कुनै शंका छैन, Zsolt Szoboszlai सबैभन्दा ठूलो प्रेरणा हो कि dribbler लाई प्रभावित गरेको छ।
सायद उनका बुबाले उनलाई केही प्रदर्शनहरू देखाउँदै थिए जुन राम्रो प्रदर्शन प्रदर्शन गर्न उनले प्रयोग गर्न सक्थे।
डोमिनिक स्जोबोस्लाइको आमाको बारेमा:
उनका अभिभावकहरु मध्ये, Zsanet Nemeth (उसकी आमा) एक निष्क्रिय खेलाडी पछि निष्क्रिय छ। पक्कै पनि, उनको प्रेम र हेरचाह एक प्रेरणा शक्ति हो कि उसलाई मद्दत गरेको सबै कठिन प्रशिक्षण सहन सक्छ। सायद उनी लजालु आमा हुन् जसले आफ्ना प्रभावशाली छोरालाई छायाबाट समर्थन गर्न रुचाउँछिन्।
कुनै श doubts्का छैन कि ऊ आफ्नो आमाको रूपमा राम्री केटी छ। स्पष्ट रूपमा, उनले आफ्ना पति र छोरालाई उनीहरूको प्रयासमा सहयोग गरेका छन्।
डोमिनिक स्जोबोस्लाइका भाइबहिनीहरूका बारे:
यो बायो कम्पाईल गर्ने समयमा, डोमिनिकको केवल एउटी बहिनी छ जसको बारेमा हामी जान्दछौं। उनले प्रशंसकलाई पनि देखाए कि उनी आफ्नो इन्स्टाग्राम पृष्ठमा आफ्नो प्यारो सानो भाइबहिनीसँग कती संलग्न छन्। तिनीहरूको उमेर को फरक एकदम ठूलो छ।
उहाँ आफ्नो प्यारी सानी बहिनी संग पौडी खेल्न भन्दा राम्रो कुनै भावना छ।
डोमिनिक स्जोबोस्लाइका आफन्तहरूका बारे:
उनको स्टारडमको उदय भएदेखि उसको हजुरबुबा र हजुरआमाको बारेमा कुनै जानकारी छैन। मोरेसो, उनको विस्तारित परिवार आफ्नो सफलताको साथ सम्मानित गर्न को लागी कदम चालेको छैन। जे होस्, हामी पक्का छौं कि उनका काका, काकी र आफन्तहरू उनको क्यारियर उपलब्धिहरुमा गर्व गर्छन्।
डोमिनिक स्जोबोस्लाइ अनटोल्ड तथ्यहरू:
प्लेमेकरको जीवनी समेट्न, यहाँ उहाँको बारेमा केहि तथ्यहरू छन् जुन तपाईंलाई उहाँको जीवन कहानीको पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
तथ्य # १: तलब ब्रेकडाउन:
तलको तालिकाले आरबी साल्जबर्गमा उसको आम्दानीको तलब बिच्छेद गर्दछ। अवश्य पनि, उसको वित्तीय कार्यवाही निश्चित रूपले २०२१ मा उनको लाइपजिग सर्ने क्रममा बढ्नेछ।
पाउन्डमा आय (€)
प्रति वर्ष M मिलियन
प्रति महिना € 250,000
प्रति हप्ता € 57,604
प्रति दिन € 8,229
प्रति घण्टा € 343
प्रति मिनेट € 5.7
प्रति सेकेन्ड € 0.10
अनुसन्धानले देखाउँदछ कि एक औसत हंगेरीको नागरिकले तीन महिनासम्म काम गर्नुपर्नेछ जुन डोमिनिकले एक महिनामा प्राप्त गर्दछ।
प्रति सेकेन्डको आय:
हामीले रणनीतिक रूपमा उसको तलबको विश्लेषणलाई घडीको टिकटको रूपमा राख्यौं। तपाईको लागि पत्ता लगाउनुहोस् कि यहाँबाट आउनु भएको बित्तिकै स्भोब्ज्लाइले कत्ति धेरै कमायो।
तपाईं डोमिनिक Szoboszlai हेर्न सुरु गर्नुभयोबायो, यो उसले कमाएको हो।
तथ्य # १: डोमिनिक स्गोबोस्लाइ ट्याटू:
विगतका केही वर्षहरूमा, डोमिनिकले आफ्ना पिताबाट धेरै पाठ सिकेका छन्। ती पाठहरू यति महत्त्वपूर्ण थिए कि उनले यसलाई आफ्नो दिमागमा छोपेका थिए, जबकि उनले देब्रे हातमा स्थायी रिमाइन्डर ट्याटूको रूपमा केही लेखेका थिए।
उसको जर्सीले पनि हातमा ग्लैमरस ट्याटूहरू कभर गर्न सक्दैन।
हो! उनले केही शिलालेखहरू लेखेका थिए जुन उनलाई स्टारडममा आउने संघर्षको पटक पटक सम्झना गराउँदछ। ट्याटु पढ्दछ; “प्रतिभा भगवानले दिनुहुन्छ। तर त्याग र दृढ संकल्पबिना यो केही मूल्यको छैन ".
विगतका केही वर्षहरूमा, डोमिनिकले धेरै आशाजनक फुटबल गुणहरू देखायो। अचम्म छैन, गोल डट कम फिफा २० भिडियो खेलमा उनलाई सर्वश्रेष्ठ युवाहरूमध्ये शामिल गरे। उसले आफ्नो क्षमताको बेन्चमार्क भन्दा पहिले यो स्थिरताको कुरा हो। हो, उसको बल कन्ट्रोल र स्टिमिना एकदम अतुलनीय छ।
उसले राम्रो फिफा तथ्या .्क पायो।
हाम्रो जोब्जस्लाइको जीवनीले देखाएको छ कि आमा बुबा सक्रिय रूपमा संलग्न हुँदा जीवनको यात्रा अक्सर सजिलो हुन्छ। यो प्लेमेकरका बुबाले फुटबलको लागि आफ्नो उत्कटता बढाए जबकि उनकी आमाले उनलाई कठिन परिस्थितिहरूमा प्रोत्साहित गरे।
निस्सन्देह, खेलोब्जलाइ अक्सर आफ्नो परिवारको लागि आभारी हुनेछन् जसले उनलाई खेलमार्फत उनीहरूलाई गर्व गर्ने जिम्मा सुम्पिदिए। पक्कै पनि, ती कारणहरू हुन् जुन उसले आफ्नो सपनाहरूको वास्तविकतालाई त्याग्दैन।
हाम्रो Szoboszlai जीवन कहानी पढ्न को लागी धन्यबाद। कृपया, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् यदि तपाईंले यस जीवनीमा कुनै अनियमितता फेला पार्नुभयो भने। साथै, तल तालिकामा ड्रिब्लरको संस्मरण सारांशमा हेर्नुहोस्।
पुरा नाम: डोमिनिक स्जोबोस्लाइ
जन्मस्थान: Szekesfehervar, हंगेरी
पिता: Zsolt Szoboszlai
आमा: Zsanet Nemeth
प्रेमिका / पत्नी हुन: काटा (III) - (पूर्व प्रेमिका)
Fanni Gecsek (२०२१ मा गर्लफ्रेन्ड)
नेट मूल्य: € १. million मिलियन (२०२० तथ्या )्क)
वार्षिक वेतन: M मिलियन डलर (साल्जबर्गमा)
रुचि: खाना पकाउँदै र भिडियो खेलहरू खेल्दै
परिमार्जित मिति: मार्च,, २०१ 16